Iindaba_Zhongshan Xiangdi Lighting Co, Ltd.
Xa sasisemncinci, sasidla ngokumamela ibali labadala basixelela malunga nenyanga.Yile ngcinga imnandi kakhulu yabantu bakudala kwi-Mid-Autumn festival. Xa sikhulile, siyayazi ukuba i-Armstrong ishiye indawo yokuqala yonyawo emntwini. Abantu babonakala ngathi bayoyisa iplanethi, kodwa loo mfihlakalo nobuhle ...
Usuku lukaZwelonke luyeza kungekudala ~ UMthendeleko weNtwasahlobo awugqithanga
Iintyatyambo zasentwasahlobo, ukuthotywa kwehlobo, ukwindla ekwindla, ikhephu ebusika, ikwindla yegolide ka-Okthobha ... Ixesha 荏苒 ~ Umthendeleko weNtwasahlobo awuyi kuba kude! ...... Umthendeleko weNtwasahlobo awukude kakhulu ~ 2019 Chinese New Year is 2019 2 Month 5 Day, usuku lokuqala lwekhalenda yenyanga, Lwesibini. Kusele iinyanga ezine, ukuqaqanjelwa kweliso ...
Ukukhanya ~ ubugcisa obuhle
Isixhobo esibonakala silula kakhulu asinakubonakalisa nje ukonwaba, kodwa kunye nobuchule bomyili kunye nengxoxo yendalo yomntu. Ngumsebenzi woyilo, ngakumbi njengomsebenzi wobugcisa. Kukho intetho kwiwebhusayithi esemthethweni ye-ENES Studio: sixuba ubugcisa, itekhnoloji kunye ...
"I-Lumiere China ukukhanya kunye noMthunzi wase China" Umnyhadala wokuKhanyisa uvula eShanghai Hongqiao Tiandi
Njengomnye weminyhadala emithathu ekhanyayo ekhanyayo, umnyhadala waseLyon Lyon unembali yeminyaka elikhulu elikhulu kwaye ungomnye weyona mibhiyozo ukhanyisayo ubonakalayo eYurophu. Lo msitho wokukhanya kunye nesithunzi somthendeleko uye waba ngumtsalane odumileyo kwinkcubeko yoluntu lwamanye amazwe, utsala abantu be-300 minyaka le. Ngexesha lomthendeleko wezibane ...
Iiphuli ze-LED zamazwe jikelele zikhanyisa iSanlitun Taikooli
Idolophu enkulu yeSanlitun, idolophu enkulu yaseBeijing, ivule ngokusemthethweni intetho yokuqala "yoMdlalo wokuKhanyisa · 2017 Sanlitun Taikooli Lighting festival". Iqela lamagcisa agqwesileyo avela kumazwe ahlukeneyo kunye nemimandla efana ne-United States, iJamani, iGrisi, ne-Israel, kwaye okokuqala ngqa ngokuphumelela amabhaso kawonke-wonke ...